မြန်မာ နိုင်ငံရှိ အိမ်ခြံမြေများ၊ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ
အမျိုးအစား အားလုံး ကွန်ဒို တိုက်ခန်း မြေကွက် ရုံးခန်း ဟိုတယ် စက်မှုဇုံ ဂိုဒေါင် လုံးချင်းအိမ် ရည်ရွယ်ချက် အားလုံး ရောင်းရန် ငှားရန် နေရာဒေသ အားလုံး ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး မကွေး တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး မွန် ပြည်နယ် ရခိုင် ပြည်နယ် ချင်း ပြည်နယ် ကချင် ပြည်နယ် ကယား ပြည်နယ် ကရင် ပြည်နယ် ရှမ်း ပြည်နယ် မြို့နယ် အားလုံး
အထူး မြန်မာ အိမ်ခြံမြေများ
ကျွန်ုပ်တို့ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံး အိမ်ခြံမြေများ
ယုဇနမြို့တော် Citymart နီး /ဈေးနီး/ကျောင်းနီး /ကားဂိတ်နီး အသင့်နေ...
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း, ရန်ကုန်
တိုက်ခန်း ရောင်းရန် 140 သိန်း
စျေးနှုန်း-140 သိန်းတိုက်(တိုက်35)/အခန်း(403)/5လွှာC/(10)လမ်း/ယုဇနဥယျဥ်မြို့တော်/ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာပါရှင့်???Citymart နီး /ဈေးနီး/ကျောင်းနီး /ကာ...
သိန်း 400 ​ကျော် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ပေကျယ် လမ်းမကြီးပေါ်မို့ စီး...
တိုက်ခန်း ရောင်းရန် 400 သိန်း
??မဟာဗန္ဓုလတံတားအဆင်း လမ်းမကြီးပေါ် Time square Condo အနီး Ocean Super Center အနီးက တိုက်ခန်း▪၁ဆေးသုတ် အိမ်ရှေ့အိမ်နောက်ကြွေပြားခင်းပီး ▪အခ...
မြေကွက် ရောင်းရန် 145 သိန်း
စမ်းချောင်း Mini Condo အရောင်း
ကွန်ဒို ရောင်းရန် 1400 သိန်း
စမ်းချောင်း Mini Condo အရောင်းပါ??မဂ်လာလမ်း?ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်နီး ဗဟိုလမ်းနီး ဗားဂရာလမ်းနီး ?(25×50)ပေအကျယ်?6လွှာ ?Master (1) ခန်း ?Sin...
ခြံရောင်းမည် တောင်ဥက္ကလာ ၆ ရပ်ကွက်
မြေကွက် ရောင်းရန် 1895 သိန်း
ခြံရောင်းမည် တောင်ဥက္ကလာ ၆ရပ်ကွက်ဝေဇယန္တာလမ်းမ ဂုတ်ခြံကျောကပ်အတွင်းလမ်းသန့် (20-60) ဂရံ သိန်း ၁၈၉၅ ညှိအကျိုးဆောင် 09457690456
မန္တလေး လမ်းမကြီး မှ ၂ခြံကျော် (၃ခြံမြောက်) နေရာကောင်း ခြံရောင်းပ...
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း, ရန်ကုန်
မြေကွက် ရောင်းရန် 1500 သိန်း
? မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ် ၊ ၃၁ ရပ်ကွက် ၊ မန္တလေးလမ်းမ ဒဲ့ပေါက်? ၄၀ပေ x ၆၀ပေ? ဂရန် / SP" ၁၅၀၀ သိန်း ''! North dagon land for sale! 40 x 60 ! Whatani...
ဒီအပိုင်းမှာတော့ အောက်မှာရှိတဲ့ တိုင်းဒေသတစ်ခုခုကို နှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ နှင့် မန္တလေး အိမ်ခြံမြေ လင့်ခ်များကို နှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်၊ သင်နဲ့နီးတဲ့ အိမ်ခြံမြေများကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေ 13 ခု
အိမ်ခြံမြေ6ခု
ဘယ် အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစားကို ရှာနေပါသလဲ?
အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်များ က သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာတွေကို ကျနော်တို့ အိမ်ခြံမြေဝဘ်ဆိုက်မှာ အခမဲ့တင်ပြီး ကြော်ငြာထားကြပါတယ်။ ဒါတွေကို သင့်အတွက်အဆင်ပြေအောင် အိမ်ခြံမြေ အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲထားပေးပါတယ်။ အခုပဲ မြေကွက်များ၊ ကွန်ဒိုမီနီယံများ၊ တိုက်ခန်းများ နဲ့ အိမ်များ အားလုံးကို အမျိုးအစားအလိုက် ရှာကြည့်လိုက်ပါဦး။
House7Entries Land6Entries Condo3Entries Apartment3Entries
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ အခြား ဒေသများက နောက်ဆုံးရ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လင့်တကူ ရှာနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါလင့်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ, ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ, ရောင်းရန် ခြံမြေများ နှင့် ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်များ။
မြေကွက် ရောင်းရန် 10000 သိန်း
ဂရန်မြေ၊ RC ၂ ထပ်၊ Master Bed Room(၂)ခန်း၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကြိုးဖုန်း၊ အဝီစိတွင်း
လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန် 320 သိန်း
ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ကန်တော်ကြီး အနီး။ ၂ ထပ်တိုက်အသစ်စက်စက်၊ ၅၅၀၀ သိန...
လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန် 5500 သိန်း
ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၆)ကန်တော်လေး။*ပြင်ဦးလွင် အထင်ကရကန်တော်လေးနှင့် ကန်တော်ကြီးကြားဂေါက်ကွင်းကပ်လျက်ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကို လှမ်းမြင်နေရသော*...
ပြင်ဦးလွင် မြေကွက်လေး ရောင်းပါမည်
မြေကွက် ရောင်းရန် 450 သိန်း
ပြင်ဦးလွင်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းအနားယူချင်သူများအတွက်နေရာကောင်းလေးပါခင်ဗျ လိပ်စာကအောင်ချမ်းသာရွာသရဖူရေကူးကန် အနောက်ဖက်မှာပါ?အောင်ချမ်းသာဆိုတာကမန်းလ...
နေပြည်တော် 1RC တိုက် ရောင်းမည်
Dekkhinathiri , မန္တလေး
လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန် 1400 သိန်း
ပေ၈၀ပတ်လည် အိမ်ခြံ ရေမီးဂရန် မ.နလှည့်ထောင့်ကွက် မာစတာ ၁ခန်း ရိုးရိုး ၁ခန်း ဧည့်ခန်း ၁ခန်းဘုရားခန်း ၁ခန်း မီးဖို ခန်း ၁ခန်း အများသုံးသန့်စင်ခန်း၁ ခန်း...
ပြင်ဦးလွင်က အရမ်းလန်းတဲ့ အိမ် အရောင်း
လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန် 3500 သိန်း
အလန်းကြီးချပြပေးမယ်နော်နေရာက ရေချမ်းအိုးမြို့တွင်းကလာရင် ပြင်ဦးလွင်စင်တာမရောက်ခင်မေတာမွန်လမ်းမမေးတင်လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်ကနေပေ၄၀၀ထက်မပိုသော အကွာအဝေးပိ...
ပုဗ္ဗသီရိမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိသည့် ငုရွှေဝါလမ်းပေါ်မှ အသင...
လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန် 850 သိန်း
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနေပြည်တော်ပုဗ္ဗသီရိက ကြိုဆိုပါတယ်ဗျ#ပုဗ္ဗသီရိမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိသည့် ငုရွှေဝါလမ်းပေါ်မှ အသင့်နေ 1RCတိုက်။********************...
လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန် 500 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူး​မြို့နယ် က လယ်ကွင်းနားကအိမ်လေး တစ်လုံး ရောင်းဖို့ရှိပါတယ်။လှည်းကူး မြို့ပေါ်နဲ့ ၁၀ မိနစ် ၃၇ ကားများ ဂိတ်နဲ့ ၄မိနစ်လောက် ဝင်ရတဲ့...
နောက်ထပ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အိမ်ခြံမြေတစ်ခုကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေနေရပါသလား? ကျနော်တို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါလင့်တွေထဲက တစ်ခုခုနဲ့ စတင်လိုက်ပါ။ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ, ငှားရန် တိုက်ခန်းများ, ငှားရန် ခြံမြေများ နှင့် ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ။
တိုက်ခန်း ငှားရန် 1.6 သိန်း
တိုက်ခန်းအငှားလှိုင်မြို့နယ် (7ရပ်ကွက်)သရက်မြိုင်လမ်း၊ဗဟိုလမ်းမအနီးသံလမ်းမှတ်တိုင်ကားဂိတ်အနီး။ဒုတိယထပ် 12.5ပေ50အခန်း/အခင်းပါ (160000)သုံးလချုပ်/လချင်း...
Sanchaung garden condo အဌား
ကွန်ဒို ငှားရန်9သိန်း
Admin တင်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျID No. 231 Sanchaung garden condo အဌားပြည်လမ်းအနီးSpirt .city mart. အနီး800sqft2floorFully funishedပစ္စည်း အစုံပါGymSwimm...
Cute house for rent in Mandalay, Chan Mya Thar Zi Township.
လုံးချင်းအိမ် ငှားရန်6သိန်း
1 large bedroom, 1 bathroom2400 total square feet600,000 kyat per month - Basic furnished *************************************Many other a...
Condo for Rent in Tamwe, close to Aryu hospital, AYA Ban
ကွန်ဒို ငှားရန်5သိန်း
Located in Tamwe, near Aryu hospital, AYA bank, quiet area.6th floor 1250 sqft1 master bedroom 1 normal bedroom 1 maid room...
နောက်ထပ် ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ